နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း နှင့် ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်း… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း နှင့် ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်း…
နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း နှင့် ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်း…
Posted by ကို ထွဋ် on Jun 19, 2014 in Aha! Jokes, Satire | 15 comments
အားလုံး.. အားလုံး… မင်္ဂလာပါ… ကျွန်တော်က အရင် လူတလုံး နာမည်နဲ့ ပို့စ်တွေတင်ခဲ့တဲ့သူပါ… အခုတော့ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ အကောင့်ကို ပြန်ဝင်လို့ မရတော့လို့… အကောင့်သစ်နဲ့ ပြန်လည်မွေးဖွားလာတာပါ… အခု ရေမြေသနင်း ကိုလဲ အားပေးကြပါလို့..
ps… တူသလားလို့… ဟီး…
ပွိုင့်တွေ နှမြောစရာပေါ့. . .
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ ရွာကို သံယောဇဉ်မပြတ်ပဲ
ညီတော်အလင်းဆက်တို့က နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုနေပါတယ် အစ်ကိုတော်ရေ
အဲဒါတော့ အက်ဒမင်ကိုပဲ အကူညီတောင်းရမှာ.. ပြန်တော့ လိုချင်ပါတယ်… အခုအကောင့်နဲ့လဲ အရင် နဲ့ မတူတဲ့.. အသက်ကလေး နည်းနည်းရလာတော့.. ပိုပြီး ရင့်ကျက်လာတဲ့ ပို့စ်တွေ တင်ဖြစ်သွားမှာပါ… အားပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကာ. . .
ဟိုအကောင့်ထဲကပိုစ့်တွေထဲ ဝင် အက်ဒစ်လုပ်
အဲဒီတုန်းက ပိုစ့်တင်သူ နာမည်ကိုဖြုတ်
အဲ့လို လုပ်လိုက်ရင်တော့ ဒီနာမည်စာရင်းအောက်
ဒါပေမယ့် အဲသလို လုပ်လို့ရသလား
အကြံပေးတာ.. ကျေးဇူးပါ… ဒါပေမဲ့.. အဲတုန်းကလဲ Update News တွေ တင်ခဲ့တာ ဆိုတော့.. အခုပြန်တင်ရင် Date Out ကုန်ပါပီ.. ကိုယ်တိုင်ရေး Own Tune လေး တချို့ပဲ ပြန်လိုချင်မိတာ..
ဒီနာမည်အောက် ရောက်အောင် ရွှေ့ ဖို့ပါ
လူတလုံးအာဘော်အစား ရေမြေ့သနင်းအာဘော်တွေ ဖတ်ရတော့မှာပေ့ါ။
ဟုတ်… ရှဲ့ ရှဲ့…
.ရေမြေသနင်း …. ဆိုတော့ ပြည်ရှင်မင်း ပေါ့…..
.ရွှေတွင်း ငွေတွင်း ပယင်းဒုတ္ထာ ရတနာခွန်နှစ်လီ …….. တို့ရဲ့ပိုင်ရှင်
.ကြုံရင် အလှူ ခံဦးမှ…
အလှူခံဆိုရင်.. တတော့ပါတေးရဲ့.. ဒီလ အကြွေးတောင် တင်နေတာ.. ဒီဇင်ဘာလကျမှ လာအလှူခံတော့.. ဘောနပ်ရတဲ့ အချိန်ပေါ့… ဟီး..
Tag ထဲက လူတစ်လုံးအာဘော် ကြီး တွေ့တိုင်း ဘယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်လို့ တွေးမိနေတာ။
အခုတော့ ရေမြေသနင်း (ပြည့်ရှင်မင်း)တောင်ဖြစ်သွားပြီးပေါ့
အခု မှ လူ ဟောင်းရော လူ သစ် ရော ဆို တော့ ရွာကြီး ပို ပြီး စိုပြည်လာ သ ပေါ့
ကိုပေါက်ရေ မင်္ဂလာပါ.. ကိုပေါက် ဆန္ဒ အတိုင်းပဲ.. လူတလုံး အကောင့် နဲ့ လူဟောင်းရော… ရေမြေ့သနင်း အကောင့်နဲ့ လူသစ်ရော ပြန်တိုးလာပါပြီ… စိုပြေလာတော့မှာပါ.. ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာ တင်ရလောက်အောင်တော့ အဆင့် မတက်လာသေးတာတော့ ခွင့်လွှတ်…